Hlaziya iApple Watch yakho ngezi zinto zintsha zewatchOS 3 (I) | IPhone iindaba
Hlaziya iApple Watch yakho ngezi zinto zintsha zewatchOS 3 (I)
UJose Alfocea | | Izifundo kunye neencwadana
Ngoku yinyanga okoko inkampani yethu esiyithandayo yazisa iApple Watch Series 1 kunye ne-2. Zombini zineeprosesa ezinamandla ezisisiseko kwaye zinika ukusebenza kunye namandla amakhulu. Kodwa ukuba unesizukulwana sokuqala se-Apple Watch kwaye awuzimisele ukukhupha ipokotho yakho kwakhona ngokufumana esinye sezixhobo ezikhoyo, kuya kufuneka uyazi ukuba ngofakelo lweWOSOS 3 iwotshi yakho yeApple izakuva ngathi intsha.
I-watchOS 3 idibanisa utshintsho olukhulu njengomsebenzi omtsha ngokupheleleyo kwiqhosha elisecaleni ngoku elibonisa idokodo kunye nezicelo ezisetyenzisiweyo ukuya kumaxesha asixhenxe ngokukhawuleza kunakwimilindo ye-2. Oku kuyitshintsha ngokupheleleyo indlela onxibelelana ngayo newotshi, kodwa zikhona ezincinci Ii-tweaks ezinje ngokunqumama okuzenzekelayo kokuzivocavoca, indlela entsha yokuthumela imiyalezo ngohlobo lwee-doodles okanye inqanaba elitsha elinikezelwe kuMsebenzi. Ukulandela, Senza uphononongo olupheleleyo lweengcebiso ezilungileyo ukuze ngewatchOS 3 iApple Watch yakho akufuneki ikhweletele nantoni na kwiimodeli ezintsha.
1 Yenza i-Dock ngokwezifiso
2 Thatha ithuba iZiko loLawulo
3 Mema abahlobo bakho ukuba babelane ngoMsebenzi
4 Sebenzisa ikhefu ngokuzenzekelayo lokuzilolonga kwakho
5 Sebenzisa ithuba lokubhala ngesandla
Yenza i-Dock ngokwezifiso
"Amagqabantshintshi" avele xa uswayipha umnwe wakho kwiscreen aphelile kwaye ngoku, ngokucinezela iqhosha elisecaleni, iDock iya kuvela apho ezona zicelo zisetyenzisiweyo zibandakanyiwe. Apho ungabeka nayiphi na iapp, kwaye zihlaziywa rhoqo ukuze ulwazi luhlaziywe kwangoko (okanye phantse).
Unokubeka izicelo ezili-10 kwidokodo. Ukwenza oku, vula usetyenziso lweApple Watch kwi-iPhone yakho, emva koko undwendwele uMboniso wam> iDock. Cofa u-Hlela phezulu ngasekunene kwaye ungeze, ucime okanye ukhethe indlela ofuna ukuba ivele ngayo.
Thatha ithuba iZiko loLawulo
Ngoku xa uslayida umnwe wakho kwiscreen, iziko lolawulo elitsha liyavela apho unokujonga khona ukuba ubungakanani bebhetri obushiyileyo kwaye unokufikelela ngokulula nangokukhawuleza kwimisebenzi enje ngemowudi yenqwelomoya, yenza ukuthula okanye ukungcangcazela, gxotha amanzi, utshixe iApple Watch ngekhowudi yokungena, khangela i-iPhone yakho, okanye iAirPlay.
Mema abahlobo bakho ukuba babelane ngoMsebenzi
Umsebenzi ngoku ubandakanye imisebenzi yentlalo. Uyakwazi ukubona inkqubela yemihla ngemihla yabahlobo bakho ngokubhekisele kwiinjongo zabo. Ungathumela kwakhona imiyalezo yenkuthazo ukuze abahlobo bakho banganikezeli kwaye ukuba uziva unakho, banokukhuphisana nabo nokuba umgama uyakusahlula.
Ukuthatha ithuba kwezi zinto, kuya kufuneka umeme abahlobo bakho ukuba babelane nawe ngeenkcukacha zabo kwaye ubalinde ukuba bamkele. Oku kunokwenziwa kwisicelo soMsebenzi we-iOS (hayi ovela kwi-app yeWatch kwi-iPhone okanye iwotshi uqobo).
Sebenzisa ikhefu ngokuzenzekelayo lokuzilolonga kwakho
Enye yezona zinto ziluncedo kakhulu ze-watchOS 3 xa kuziwa kwimisebenzi yomzimba yile ikhefu oluzenzekelayo. Ngoku, xa ubaleka kwaye kufuneka uqale kwirobhothi, iwotshi yakho iyakuyifumana kwaye ime kancinci ngaphandle kokuba wenze nantoni na.
Umsebenzi wekhefu ozenzekelayo awusebenzi njengesiqhelo, ke kuya kufuneka uyisebenzise kwi-Apple Watch usetyenziso kwi-iPhone yakho: iwotshi yam> Uqeqesho kunye nokwenza kusebenze ukhetho.
Ukuba awufuni ukwenza ikhefu elizenzekelayo, unganqumamisa umsebenzi wakho ngokushenxisa ikhusi lewotshi ngasekunene ukubonisa ikhefu lokukhetha, ukuphela kunye nokutshixa iwotshi.
Sebenzisa ithuba lokubhala ngesandla
Kukho amaxesha apho ungenako, okanye ungafuniyo, ukukhupha i-iPhone yakho, okanye ukuyalela impendulo kumyalezo akunakwenzeka kwaye awunayo eyona mpendulo ichazwe kwangaphambili. Ngokuchanekileyo ngaloo mizuzu ungathatha ithuba lalo "kubhala" okanye umsebenzi wokubhala kwiscreen se-Apple Watch yakho.
ukuba thumela umyalezo nge-doodleCofa nje i-bubble squiggle bubble kwiimpendulo onokukhetha kuzo, ezibandakanya iDigital Touch, i-emoji, ilizwi eliyalelayo, kunye neempendulo ezikhawulezayo osele uzigcinile.
Siseneengcebiso ezininzi zokuzihlaziya, ke ungaphoswa yinxalenye yesibini yale posi, kuba eyona ilungileyo isaza kuza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Hlaziya iApple Watch yakho ngezi zinto zintsha zewatchOS 3 (I)
I-Scribble ayisebenzi nolwimi lwaseSpanish okwangoku, ngaba ndilungile?
Aba bantu abanalo uluvo lokufuna. Bazinikezela kuphela ekuguquleleni kwiiwebhusayithi zaseMelika. Ubabamba ngokurhoxa emsebenzini kabini kabini kathathu. Umsebenzi we «doodle» awubonakali kumlindo wam ...
Ngaba ucinga ukuba xa i-Apple iyifaka eSpanish iya kuyibiza ngokuba yi "doodle"?
Utshintsha njani ubeko lweeapps kwiApple Watch yakho
I-Apple iyakuqinisekisa ukufika kwe-iPhone 7 kumazwe amatsha